Atụmatụ maka Gramado - Brazil - 1aviagem.com
Gara aga post: Singapore na ihe nzuzo n’abia 500 dollars gum
Nkwupụta ọzọ: Ihe ịchọrọ ịma gbasara Vaccines
Edebere 9 January 2019 Nyocha 3 site Römulo Lucena
Taa, anyị ga-ekwu maka obodo a mara mma nke dị na ndịda Brazil.
Gramado bụ 120 kilomita site na Porto Alegre n'isi obodo Rio Grande do Sul. Ma ọ dị mwute ikwu na obodo enweghị ọdụ ụgbọ elu ...
Iji nweta n'ebe ị nwere ike ịga ụgbọelu na Porto Alegre (POA) na-aga si n'ebe bọs (R $ 32,00 kpọmkwem Bus ọnụ, na-enweghị ịbụ njem nleta, nke a bụ ndị dị ọnụ ala) ma ọ bụ onyeisi nchịkwa R $ 53,60). Ma ọ bụ site na Taxi, Uber ka Gramado. (Ụdị ahịa a adịlarịrị).
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ndị enyi Gaucho na ha "dị jụụ" ha pụkwara ịdọrọ gị n'ebe ahụ! Ma nke a bụ ihe ọma anyị nwere. (I.e.
3 Gauchos + 1 Candango infiltrated
Ọfọn, ugbu a ị maara otú ị ga-esi gaa Gramado, ka anyị gbadaa azụ ahịa.
Kedu ihe ị ga-eme na Gramado?
1- Echere m na ihe mbụ bụ ịchọta ụlọ nkwari akụ ma lelee. hehe. (I.e.
Ịnọgide na-atụgharị uche bụ ịbanye n'ọdịnihu, Gramado nwere ebe obibi maka ihe niile masịrị na ụdị, mana ọ bụ obodo nleta. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ada akara mba site na oge ị na-abata ị n'ihe ize ndụ ... ma ọ bụ na-agba ọsọ (n'ihi na obodo ga-juru n'ọnụ), ma ọ bụ ga-anọ a obere inwekwu si n'obodo. Ya mere, inwekwu nhọrọ ma kwụọ ụgwọ bụ ide ụlọ nkwari akụ, ụlọ mbikọ ma ọ bụ ụlọ mbikọ tupu oge eruo. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ebe dị mma, na-enweghị oke mkpọtụ, wdg.
2- Nweta Avenida Borges de Medeiros
Nke a bụ isi uzo nke ahịhịa na site na ya na-enye ruo etiti nke nlegharị anya dị ka ihe oyiyi nke Kikito (dị ka anyị ga-akọwa na ọ), Joaquina Rita ji ebu ozu Lake, Kpuchie Street, Church St. Peter Onyeozi matriks; isi okwu maka Christmas Light; chocolates, ọtụtụ chocolates na nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ tinyere Avenida Borges de Medeiros. Aro ahụ bụ ịga ije na ụkwụ. Ebe ọ bụ na okporo ụzọ nwere ike na-agwụsị nke ọma na ọ na-ewe ọtụtụ ihe iji nweta ọ bụla n'akụkụ ya karịa njem obi ụtọ maka ya. Kwere m, ọ bara uru njem ụkwụ! (N'ezie, lelee ọnọdụ okporo ụzọ tupu) 😉
3 - Gaa na Coberta Street na São Pedro Church
Okporo ụzọ kpuchie bụ ebe ebe Ejiji Krismas. n'ime ya, e nwere ụfọdụ ihe na-egosi coral, ọ pụkwara ịchọta ọtụtụ ụlọ ahịa dị mma na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na gburugburu Chọọchị St. Peter.
Banyere Chọọchị, nke ọma, ọ ghaghị ịdị na-achọsi ike maka ịlụ di ma ọ bụ nwunye, mgbe ọ bụla n'ime ya bụ Isi Iyi nke Ịhụnanya Ebighị Ebi.
Enwere ọbụna Jesus Maneiro n'ime ya.
4 - Na-eri ihe, na-eri nri na iri nri
Ee, ọ bụrụ na ị gaa Lawn, nri agaghị adị.
Malite na chocolates, ị nwere ike ịgafe n'Alaeze Chocolate, nke na-akọwa otú chocolates nke ụlọ malitere na Brazil. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike detụ chocolates si Lugano, site na Prawer, Florybal na na. Jiri ihe atụ, laghachi ma rie ọzọ iji kpochapụ ajụjụ nke kacha mma.
Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọtụtụ nri ọhụrụ. Nke ahụ pụtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ahụmahụ dị mma, na-eche, nwee ndidi, were oge, mana ọ bara uru! Ọ dị mma!
Na-eri nri. Enwere ụdị Fondue dị iche m maara. Na nke a, anụ ahụ na-abịa, ị na-erikwa n'oge awa ịchọrọ, na nkume nke fọdụrụ na ọkụ ọkụ. O nwekwara ike iri mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ n'ime mkpụrụ chocolate (n'ezie).
N'ikpeazụ, ọ na-esitekwa n'ọtụtụ mmanya dị iche iche, mgbe mpaghara ugwu a dum nwere ọtụtụ n'ime ihe ahụ ị ga-enye. Na-emeri ndụ!
(Ọ bụ ya mere m ji eri nri, iri nri na iri nri, ma lezienụ anya maka ihe akpịrịkpa mgbe e mesịrị?!)
5- Obere World
Ọ bụrụ na-amasị gị nro, elu, na obere ihe ịchọ mma, nke a bụ ebe gị. Na Obere Osimiri, ọ ga-ekwe omume "njem" site n'ọtụtụ mba na nlegharị anya Brazil. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ Ụlọ Elu Germany, Ụlọ Osimiri Austrian, General Minas Church, Bariloche Airport, wdg. Ejiri mba 8 nọchite anya ya. Ọnụ bụ ichere maka njem nleta. N'ihi na enwere ụfọdụ ihe na-ahụ anya site na anya a zụrụ azụ. Dịka ọmụmaatụ, obere nwa na fox (na nso ọdụ ụgbọ elu nke Bariloche) darth vader na ndị ọrụ Star Wars na nso vinema ahụ. Na mgbakwunye na obodo nke Chaves na ya Quico na Chiquinha na square. Ọ dị nnọọ mma ịhụ ụdị ndị ahụ dị ntakịrị na ịkọtara oge ha bụ nwata. Ọfọn, ọ bara uru. Mgbe e mesịrị, m ga-eme ọkwa banyere Obere World, M kwere nkwa!
Osimiri ọdọ bụ ogige ntụrụndụ Gramado na ọnụ ụzọ bụ n'efu ma nwee obi ụtọ ije ije. Hydrangeas na ọdọ mmiri ahụ na-enye mma. O nwekwara ike ịgbazite ụgbọ mmiri na-agagharị na ọdọ mmiri. Maka R $ 40,00, di na nwunye ahụ nwere ike ịnya n'elu obere ụgbọ mmiri. Ruo 180 n'arọ gbakwunyere ibu nke ma.
Fly Rose ofufe
Ma ọ bụrụ na ị nụlarịrị na ị bụ obere ibu n'ihi nri dị oke na nri na-edozi ahụ ị ga-achọ iji kwụkwuo ego iji kwụ ụgbọ mmiri. N'elu 180 n'arọ gbakwunyere di na nwunye (+ ma ọ bụ - 90 n'arọ maka nke ọ bụla) akwụ ụgwọ R $ 50,00. Ee, maka ụgbọ mmiri pedal a na-ewusi ike (nke na-akwado nnukwu ọkwa) Nke a na-egbochi ụgbọ mmiri!
Ma naanị m riri kọfị colonial
Ma ọ bụrụ na ị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị otu enyi gị na-aga, chee echiche banyere ịhọrọ ụgbọ mmiri ụkwụ, ndụmọdụ ahụ bụ ịhọrọ nnukwu ihe. Ọfọn, ị bụ onye maara ebe Titanic na ịchọrọ igwu egwu na Gramado. hehe.
Iji mee ihe n'eziokwu, enweghị m ohere iji gaa na nke a, ma ọ bụ ezie, enweghi m ike ịkwụsị ịkpọ ya.
Ọ bụ ebe na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ụgbọ ala ụgbọ mmiri na-agbakwunye ihe nketa nke ezinụlọ Urbini. Echiche bụ ịkọ banyere ụwa ụgbọ mmiri ahụ na nkà na ije. Tiketi maka saịtị ahụ na-akwụ ụgwọ R $ 68,00. Aga m ahapụ njikọ ebe a iji kwado onye ọ bụla chọrọ ịga.
8- Gaa na Ụlọ Ihe nkiri Ụlọ Ihe nkiri
Nke a bụ ebe ememme fim Gramado si, ebe ha na-anapụta Kikito (nke ga-abụ otu Oscar Brazil.
Ọ bụghị nke a, mana nke a!
Kikito bụ ihe e kere eke nke Elisabeth Rosenfeld ma na-anọchite anya chi dị mma ọchị. Kemgbe mbipụta mbụ nke Ememme Nkiri Gramado, a họọrọ ya ịbụ ihe nnọchianya ya.
Nke a sitere na foto nyere onyinye site na di na nwunye Elisabeth na Kurt
9- Gaa na cinnamon.
Obodo dị nso bụ naanị 7 kilomita site na Gramado, mana ka post a na-esiwanye nnukwu, ana m ahapụ ide banyere pawuda na ohere na-abịanụ.
A hug na ọbụna karịa! (I.e.
Olee otú Borges de Medeiros Brasil ike rie Gramado ike nwa ọdọ Obere ụwa ụwa ụgbọ mmiri Ejiji Krismas Rio Grande do Sul Kpuchie n'okporo ámá Saint Pita
January 9 si na 2019 gaa 21: 22
January 10 si na 2019 gaa 08: 50
January 19 si na 2019 gaa 20: 29